Iindaba-Imvelaphi yamavili omnyango
Imvelaphi ye- iivili zomnyango：
NgokweMbali Jikelele yeHlabathi, amavili aqala ukubonakala eMesopotamiya, nase China, amavili avela malunga ne-1500 BC. Ngokuqengqa iviliUkuxubana nomphezulu wokudibana kunokuncitshiswa kakhulu, kwaye izinto ezinzima zinokudluliselwa ngokulula ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye indawo, ukunciphisa iindleko zabasebenzi.
Ukufaka ivili emnyango linyathelo elikhulu. Ivili lomnyango lavela e-China kwaye lasasazeka eKorea, Japan nakwamanye amazwe kunye nenkcubeko yamaTshayina. Kweminye imizobo yamandulo yamaTshayina kunokubonwa kusasazeke iingcango ezityibilikayo, ezinje ngemizobo yokuma komhlaba yeNgoma yoBukhosi, kukho iingcango ezityibilikayo.
Ekuqaleni kwenkulungwane ye-19, iBritishson yaseBritane yavelisa uloliwe wokuqala emhlabeni. Ukuvela koololiwe kukhuthaze ukwenziwa kwemizila kunye namavili oololiwe ngeentsimbi. Iivili zoololiwe ezineeflange zilungele ukuthintela oololiwe ekutyibilikeni nasekuphumleni xa bebaleka ngesantya esiphezulu okanye bejika. Uyilo lweli vili likaloliwe kamva lasetyenziswa kuloiivili zomnyango.
Ekupheleni kwekhulu lama-20, ibango iivili zomnyangoikhule. Nangona kunjalo, ngaphambi kuka-2002, phantse babengekho abavelisi abaqeqeshiweyo bamavili emnyango e-China, kwaye imarike yamavili emnyango yayihlala iimveliso zangaphandle ezinje ngeTaiwan, iUnited States, iJamani, iJapan njalo njalo. Nangona kunjalo, akukho shishini lasekhaya linokukhuphisana nabo. Abavelisi basekhaya beDinggu Hardware baqala bakhulisa bavelisa iivili ezijingayo. Ukuveliswa kwevili lomnyango nokuba kubuchwepheshe okanye kumgangatho kulifumene inqanaba lehlabathi lokuphakamisa ivili, kwaye nakwezinye iinkalo kugqithile.
Izinto zevili lokuphakamisa zahluke kakhulu, izinto eziphambili zeqokobhe zibandakanya intsimbi engenasici, ingxubevange yezinki, ingxubevange yobhedu, njl.
Izinto ivili emnyango:
Ngokwezixhobo ze ivili lomnyango,kukho irola yensimbi, irollerler eqinileyo, iplastiki yokuthwala iplastiki, ifayibha yenayiloni ethwele i-roller kunye ne-multilayer roller edibeneyo. Umbala oqhelekileyo weplastikhi uthambile, unokusetyenziselwa kuphela i-60KG yomnyango, amandla esinyithi, kodwa xa unxibelelana nomkhondo kulula ukuvelisa ingxolo; I-POM ineempawu ezintle zoomatshini, ukuxhathisa kwayo kukudinwa okuphezulu kwi-thermoplastic, i-modulus yayo ye-elastic ibhetele kuneyiloni 66, ABS, polycarbonate, ubushushu bokusetyenziswa ngokubanzi. I-POM yeplastikhi yokuthungwa okunzima, ukutyibilika ngokutyibilikayo, ukuhlala ixesha elide, ukusebenza kwezinto kunzima ukulawula, ngabavelisi abambalwa kuphela basekhaya abanokuvelisa, besebenzisa i-POM roller eqinileyo, ukuthwala kubekwe embindini womzimba ophambili, ukhuseleko, yenza isiphumo sokuhambisa ngcono, kodwa ihlala ixesha elide.